UNGAZIFUMANA NJANI IITWEETS ZOMNTU EZICINYIWEYO NGOKULULA? - IBHLOG
Ungazifumana njani iiTweets zomntu ezicinyiweyo ngokulula?
I-Twitter imalunga neetweets. Yimithombo yeendaba ezentlalo ekwabelana ngolwazi ngeetweets. Enye yeendaba ezithandwa kakhulu ngabantu ezisetyenziswa ngabantu kwihlabathi liphela. Uninzi lwabasebenzisi bafuna ukwazi ukuba banokujonga njani iifayile ezisusiweyo kwi-Twitter. Banokujonga eli khonkco ukuze bazi ngalo. Ewe, i-Twitter imalunga neetweets zabasebenzisi kwaye esi sesona sizathu sokuba i-Twitter idume. Ke, zii-tweets abantu abakhetha ixesha elininzi ngelixa besebenzisa i-Twitter. Ujoliso lwabo kuku jonga ii-tweets ezisusiweyo Kwi-Twitter. Apha siza kuchaza iindlela zokujonga iifayile ezisusiweyo kwi-Twitter.
Ungazifumana njani iiTweets ezisusiweyo?
Ngoku, nawuphi na umsebenzisi onamava we-Twitter uyazi ukuba kuyakhathaza kangakanani ukucima i-tweet ngengozi. Ukucinezela amaqhosha nje ambalwa ngokungalunganga kunokuyisusa lula loo datha, ungaze uphinde ubonwe, okanye ngaba kunjalo? Sebenzisa le ndlela uya kuyazi indlela yokufumana iifayile zomntu ezicinyiweyo. Ngoku, kwi-Twitter, ii-tweets zakho mhlawumbi azinyamalali, kodwa kuwe, ngokuqinisekileyo ziyakwenza! Kwaye ngelixa kungenakwenzeka ukubuyisela iifayile zakho kwiprofayili yakho ye-Twitter, unokukwazi ukubamba, kodwa akukho ziqinisekiso apha. Ke elona thuba lakho lihle lokujonga iifayile ezisusiweyo yinkqubo yokubamba egcina iifoto zangaphambili ze-Twitter. Ke, enye indlela yokubona kunye nokufumana iifayile ezisusiweyo kukubajonga kwiwebhusayithi esele igcwele kwaye bagcine izigidi zeetweets ezinje, twipu.com . Kwaye, ungaya kolu hlobo lwesiza kwaye uchwetheze isicatshulwa esikhutshiweyo kwibar yokukhangela. Ngale ndlela, unokufumana iifayile ezisusiweyo kwi-Twitter. Kwaye unokufumana yonke imibhalo egciniweyo kwiakhawunti ethile ngokubeka igama lomsebenzisi nje emva kwegama lewebhusayithi kunye ne-slash, umzekelo, twipu.com/igama lomsebenzisi . Ke, ngale ndlela, unokubona ii-tweets zomntu kuphela, kwaye iya kukunceda unciphise ukukhangela. Ke kukho le app ibizwa ngokuba yi-Snap Bird uninzi lweewebhusayithi kunye nabasebenzisi beforum bacebisa, ukujonga iiposti zakho ze-Twitter ezisusiweyo kunye neempendulo. Ngoncedo lwezixhobo zomntu wesithathu, ungabona iifayile ezisusiweyo. Kodwa, indawo ayibandakanyi ii-tweets ezisusiweyo. Kwaye ilayisha iprofayile yakho ye-Twitter ukukuvumela ukuba ukhangele kwaye ujonge ii-tweets ezindala, iimpendulo zempendulo, iimpendulo kunye nemiyalezo. Okulandelayo kukucela ikopi yogcino lwakho lwe-Twitter: Okokuqala, yiya kwiphepha lakho leAkhawunti kwiakhawunti yakho ye-Twitter. Emva koko yiya kwiMxholo. Kwaye ukusukela apho, uya kubona iqhosha elithi Cela uVimba wakho. Ngoku, kuxhomekeke kubungakanani bedatha ekufuneka ihlanganiswe ngu-Twitter, ikopi yakho iya kufika ngaphakathi kwemizuzu, iiyure, okanye neentsuku. Kwaye, xa ugcino lwakho olubonakalayo lulungile, uya kuthunyelwa isaziso sokutyhala esiya kukubuyisela kwiphepha lakho leakhawunti le-Twitter. Emva koko, ukusuka apha, cofa indawo ethi Khuphela kuVimba. Okokugqibela isikhumbuzi, ngaphambi kokwenza oku, qiniseka ukuba iinkcukacha ze-imeyile ozisebenzisayo ku-Twitter zihlaziywa. Kwaye, i-Twitter ihlala ithumela ifayile enokukhutshelwa kwidilesi ye-imeyile njengogcino. Kwaye, xa ucela ikopi yogcino lwakho lwe-Twitter, uya kuthunyelwa ifayile ye.zip enefayile ye-index.html ekuvumela ukuba ukhangele indawo yakho yokugcina kwi-browser yakho yewebhu, kunye nefayile ye-.csv enokuvulwa usebenzisa Inkqubo oyithandayo yespredishithi. Ke kukho le app ibizwa ngokuba yi-Snap Bird uninzi lweewebhusayithi kunye nabasebenzisi beforum bacebisa, ukujonga iiposti zakho ze-Twitter ezisusiweyo kunye neempendulo. Oku kukuxelela indlela yokujonga iifayile ezisusiweyo. Kodwa, indawo ayibandakanyi ii-tweets ezisusiweyo. Kwaye ilayisha iprofayile yakho ye-Twitter ukukuvumela ukuba ukhangele kwaye ujonge ii-tweets ezindala, iimpendulo zempendulo, iimpendulo kunye nemiyalezo. Kwaye kuza kuluncedo ukuba ulibale ukuphinda ubhale into okanye awutshintshanga mpendulo. Kodwa ukuba ufuna ukusebenzisa i-Snap Bird ukufumana i-tweet ofuna ukuyabelana ngayo okanye ufuna ukuyitshintsha impendulo, indawo iluncedo kakhulu kwaye inee-upsides zayo, ezinokubakho kwicala eliphantsi ngokokhuseleko. Kufuneka uqinisekise usetyenziso nge-Twitter, uyinike ukufikelela kwiprofayile kunye neeDM. Ngale ndlela unokukhangela ii-tweets ezisusiweyo. Eyokugqibela nguMatshini weWayback. Ke, okokuqala, yiya kwiwebhusayithi yayo esemthethweni. Emva koko faka ikhonkco leprofayili ofuna ukujonga kuyo. Emva koko, ukugqitywa kokukhangela kuya kuba kwifom yekhalenda enezangqa eziluhlaza macala onke. Cofa nje kumhla ofuna ukuwubona ngayo. Kwaye kunokuba kunokwenzeka ukuba ungene kwiakhawunti yakho ye-Twitter ukufikelela kwii-tweets.
Kweli hlabathi lanamhlanje losasazo lwentlalo nayo yonke into, zimbini kuphela izindlu zamandla okanye oko kubizwa ngokuba ngamaqonga adumileyo abantu kwaye ziiFacebook neTwitter. Kwaye abo bantu baneeakhawunti zeTwitter bayawazi amandla eTwitter yakho, ukuba yintoni enokuyenza okanye ibangele kwihlabathi ukuba isetyenziswe kakuhle. Kodwa eyona nto ufuna ukubona ukucinywa kweetweets zabantu phaya kwi-Twitter. Ewe, abaninzi bayazicima ii-tweets zabo ngenjongo okanye ngempazamo kwaye abazi ukuba bangayifumana njani ukuze bayishiye okanye benze enye. Kananjalo, abasebenzisi abaninzi bafuna ukwazi ukuba bangazifumana njani ii-tweets zomntu ezisusiweyo. Kwaye apha siza kukunceda ufunde ukuba ungazijonga njani ezi tweets zisusiweyo ngokwabelana ngeempawu ze-Twitter, ukuba isebenza njani, kunye nendlela onokuthi uhambe ngayo kwaye ufumane ii-tweets ezisusiweyo. I-Twitter ikwenzile kunzima kodwa akufuneki ukuba ukhathazeke kuba sinezixhobo kunye neendlela zokucoca indlela nokwenza kube lula kuwe. Ke, silandele nje kwaye ufunde ukusebenzisa ezinye izimvo zokuyila ukubona iifayile ezisusiweyo zabanye abasebenzisi.
Ngale ndlela, unokwazi ** ukubona ii-tweets ezisusiweyo ** usebenzisa izixhobo zomntu wesithathu kunye neendlela ezahlukeneyo ezikuvumela ukuba ungene kwi-Twitter ukuze uzibone. Kuya kufuneka ufake izixhobo zomntu wesithathu okanye usetyenziso ukuba uyathanda kuba ziyilelwe ukwenza umsebenzi wakho ube lula, awunyanzelekanga ukuba unayo. Ke, ngale ndlela, unokujonga iifayile ezisusiweyo kwi-Twitter ngokulula nangokukhululekileyo ngaphandle kokophula nayiphi na imithetho.
UMorioh yindawo yokwenza iBrand Brand eNkulu, nxibelelana nabaphuhlisi kwihlabathi liphela kwaye ukhulise ikhondo lakho lomsebenzi!
usetyenziso oluninzi lwephepha lokusebenza
Guqula int ibe ngumtya js
ukusombulula njani usetyenziso lwemali olungena ukungena kwesi sixhobo
Isifundo seJava script
Umsebenzi osemgangathweni wokutenxa python
html5 kunye ne-css3 tutorial